Hayes & Y ကို - လန်ဒန်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်နာမည်အသစ် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Hayes & Y ကို
ဟေးယက်, Hillingdonအပေါ် 1965 ကတည်းကအနောက်လန်ဒန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Hayes ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးကားအဘယျက The Beatles ၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းများ၏နောက်ကျောအပေါ်ထွင်းသည့်ကမ္ပည်း "ဟေးယက်, Middlesex" ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က Hayes & Y ကိုများမှာ!
frontman နှင့်ဂစ်တာသမားနှင့် Rado Lozanov - - ဒီတစ်ခါလည်းအတိအကျက "Y ကို" ( "? အဘယ်ကြောင့်" ၏တစ်ဦး homophone) Blago Atanasov နဲ့ငါ့အင်တာဗျူး၏ချည်ပါလိမ့်မည်အုပ်စုများ၏ဦးဆောင်ဂစ်တာသမား ...
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအဘယ်ကြောင့်သူတို့က "ဘာကြောင့်လဲ" ဟုမေးခံရမကြိုက်ဘူး, အမြူဆိုင်း Albion အတွက်ကျောက်ချရပ်နားခဲ့ဘူး, သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်လျှောက်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်ဆုံး 12 လအတွင်း Hayes & Y ကိုများအတွက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပြီ: နှစ်ခု EP အယ်လ်ဘမ်: "ရေတစ်အလွန်အမင်း Bottle သသန်းတစ်ခုတည်းသောအရာပိုဆိုးတာက" "Heiz ဝေənd" နှင့်; ရုံ Kasabian မတိုင်မီနီးပါး 10-တထောင်ကလူတစ်ဦးပရိသတ်ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ Burgas ၏ပွဲတော်ဝိညာဉျတျောမှာဖျော်ဖြေပွဲ, တစ်ဦးကအင်္ဂလန်အတွက်အသေးစားခရီးစဉ်သုံးခုအရာရှိတဦးကဗီဒီယိုဆိုရင် single သူတို့ပြီးသားလန်ဒန်ကလပ်မြင်ကွင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နားထောင် မင်းကိုယ့်ကိုစိတ်ကုန်စေတယ် :
Boyan Bochev အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag များအတွက်:
ကျနော်တို့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအသက်ရှင်ခဲ့ကြရှိရာလန်ဒန်၌အကြှနျုပျတို့၏ငှားရမ်းထားသောတိုက်ခန်း၌ရှိကြ၏။ ကျနော်တို့ကန်ဒန်းမြို့မှာဒေသခံတစ်ဦးကလပ်မှာဖျော်ဖြေပွဲရှိသည်သွားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေတိုရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပိုပိုပြီးနေရာကစားရန်နှင့်ဒေသခံမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်မှာငါတို့အရပ်ဌာနကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။
© Hayes & Y ကို
Plamen Bijev ©
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုသင်ကလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အရာခပ်သိမ်းကြိုးစားနိုင်တဲ့အကြီးအနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရာအားလုံးလန်ဒန်၌သင်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရှာခြင်းငှါကျနော်တို့ကဒီမှာဘာကြောင့်ပါပဲ။ ဂီတလူငယ်များအဘို့ဖြစ်၏အဘယ်သူမျှအဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်သူတို့ရဲ့လေးဆယ်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအုပ်စုအသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြုန်းဖို့အချိန်မရှိသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါတို့အရပ်ဌာနကိုဤနေရာတွင်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမိမိကိုမိမိမယုံကြည်ပါဘူးဆိုရင်, သူကဘာမှလုပ်နေတာစတင်ရန်အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ်။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာကျနော်တို့အောင်မြင်ရန်လိုချင်တာတွေ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးရှိခြင်း, အုပ်စုတစုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုအဘို့အရပ်တယ်။ လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ငါသည်အဘယ်သူ၏ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းငါတို့ရန်အလွန်ဆင်တူလမ်းအတွက်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှု, ကံနှင့်, သင်တန်း, အကြီးသီချင်းတွေကိုနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကဒဏ္ဍာရီရော့ခ်အုပ်စုများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာကြပါပြီ U2 ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိယူပါ။
ကျနော်တို့အသစ်သောသီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအပြုသဘောဦးတည်နေတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမျှစံချိန်တင်အဖြစ်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သူတို့ယခင်သီချင်းများထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်။
© DK ဓါတ်ပုံပညာ
အဆိုပါသံကိုခေတ်မီသူဖြစ်ရမည်ကျနော်တို့ခေတ်ပြိုင်တီးဝိုင်းကဲ့သို့မြည်သကဲ့သို့အဆက်မပြတ်တီးဝိုင်းများ၏အသံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုင်မပြောင်းပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့ကိုကျောက်တီးဝိုင်းရှိနေဆဲ, ဒါပေမယ့်သင်တို့သည်ငါတို့၏အနာဂတ်သီချင်းတွေကိုပိုမိုလျှပ်စစ်အသံမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဘောလုံးကွင်းကိုစိတ်ဝင်စားသော်လည်း, ယခုအထိကျွန်တော်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပွဲသွားပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းကြောင်းလမ်းမရှိသော, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒေသခံအရက်ဆိုင်အပေါ်မှီခိုနေရသည်။
©တယောသမားရဲ့တံတောင်ဆစ် - ကန်ဒန်း
သို့သော်အနည်းငယ်ကအခြားအချက်များလည်းရှိပါသည် - ဥပမာအားဖြင့်, ငါရုံးအလုပ်ပြန်မသွားနိုင်ဖို့အလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်၏။ ရှင်းနေသည်မှာတဦးတည်းရည်မှန်းချက်မရှိဘဲရလဒ်များကိုမရနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ငါတို့မဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Hayes & Y ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ:
အဆိုပါ Hayes & Y ကို website မှာသွားရောက်ကြည့်ရှု
Facebook ပေါ်မှာ Hayes & Y ကို
Soundcloud အပေါ်Слушайте Hayes & Y ကို
iTunes ကိုအပေါ် Hayes & Y ကို Buy
Indie ရော့ခ်, လန်ဒန်, ဂီတ | | rating:5/ 30